Agaasimaha warfaafinta Aqalka Cad ee Mareykanka oo iscasilay
Agaasimaha warfaafinta Aqalka Cad ee Mareykanka, Mike Dubke, ayaa xilkaasi iska casilay saddex bilood kaddib markii jagadaasi loo dhiibay.
30 Maajo 2017
Maqal Dawladda oo faahfaahin ka bixisay diyaaraddii ku dhacday Muqdisho
Kadib markii diyaarad yar ay si deg deg ah ugu dagtay dhabaha diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka Muqdisho ayaa keentay inay istaagaan dhammaan duulimaadyadii garoonka Aadan Cadde.
Dawladda oo faahfaahin ka bixisay diyaaraddii ku dhacday Muqdisho
Saynisyahanno Maraykan ah ayaa sheegay in ay sameeyeen nooc cusub oo antibiyootig ah.
Maqal Kenya oo samaysatay khad tareen oo casri ah
Waxaa saacado yar oo keli ahi ka hadhsanyihiin xadhig ka jaridda tareen iyo dhabbihiisa cusub oo ka mid ah mashriicda ugu waaweyn ee laga hirgaliyey dalalka ku yaal Bariga Afrika.
Kenya oo samaysatay khad tareen oo casri ah
Dawladda Australia ayaa qorshaynaysa in ay baasaboorrada u diido dadka lagu xukumo in ay faraxumeeyeen carruur iyada oo u cuskanaysa qorshe cusub oo ay dawlladdu wado kaas oo ah "midkii koobaad ee noociisa ah ee adduunka" soo mara.
'Toban ruux oo ku dhimatay qarax lala beegsaday dad af-furayay'
Qof qaarigii uu watay ku qarxiyay goob ay isugu yimaadeen dad soomanaa oo af-furayay oo ku taalla caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ayaa dilay ugu yaraan 10 ruux dhaawacyna dad badan oo kale.
Yemen: Boqolaal qof ayaa cudurka daacuun caloolaha ugu geeriyooday
Tirada dhimashada dadka u dhintay cudurka daacuun caloolaha ee ka dilaacay wadanka Yemen ayaa kor u kacday iyado gaartay in ka badan 470 qof.
Maqal Xildhibaan ka tirsan Jubbaland oo diidan Xilka qaadis lagu sameeyey
Dhawaan ayaa xubnaha Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen xildhibaano ka tirsan Barlamaankaas oo ku eedeeyeen in ay kuxadgudbeen sharciga.
Xildhibaan ka tirsan Jubbaland oo diidan Xilka qaadis lagu sameeyey
Maqal Tartamadda aqooneed ee Ramadaanka & Warbaahinta Soomaalida
Xarumaha warbaahinta Soomaalida ayaa bisha Ramadaan waxay qabtaan tartamo aqooneed oo ay ku tartansiiyaan dhalinyarada iyagoo degmooyin, xaafaddo iyo iskoolo tartamadaas u qabta.
Tartamadda aqooneed ee Ramadaanka & Warbaahinta Soomaalida
Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey taageero uu u u hayo wiilka uu Sodoga u yahay ee Kushner, tani oo la xiriirta wararka ku aadan uu isku dayay sameynta khad isgaarsiineed oo qarsoodi ah oo lala sameeyo xukuumadda Ruushka.
Hay'adda sirdoonka ee Britain ee MI5 ayaa samaynaysa baaritaan la xiriira sida ay ku dhacday in ay tallaabo ka qaadi wayday digniino uga yimid dad weynaha oo tilmaamayey in uu halis ahaa Salman Abedi oo ah ninkii isku qarxiyay Manchester.
Rasaasayn habeennimadii ka dhacay gobolka Mississippi ee dalka Maraykanka ayaa horseeday in ay ku nafwaayaan siddeed ruux oo uu ka mid yahay taliye ku xigeenka deegaankaas
Madaxweynaha Brazil, Michel Temer, ayaa bedelay wasiirkiisa cadaallada, xilli uu wajahayo fadeexad musuqmaasuq iyo dibed baxyo ka dhan ah dowladdiisa.
Yurub “si buuxda isuguma halayn karto” Maraykanka iyo UK, ka dib doorashadii madaxweyne Trump iyo aftidii ay Britain ku go’aansatay ka bixidda Midowga Yurub, ayay tiri hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel.
Iyaga oo ku safan teendho derbigeeda, kuna tiirsan barkimo la xardhay isla markaana lugaha ay uga xiran yihiin qalab koronto ku shaqeeyo oo dhaqdhaqaaqooda lagula soconayo ayaa sagaal nin oo maxaabiis ah oo ka tirsan ururka Al-Qaacida, una dhashay dalka Yemen waxaa ka muuqanaya xasilooni la`aan ba'an. Waxay marna fidinayaan marna laabayaan gacmahooda.
28 Maajo 2017
Qaramada Midoobey oo ka digtay halis soo wajahda shacabka Mosul
Qaramada Midoobey ayaa ka sheegtay in khasaaraha ugu weyn uu ku dhacayo dadka rayidka ah iyada oo duulaanka lagu qaadey kooxda la baxdey Dowlada Islaamka ee magaalada Mosul uu marayo wajigii ugu danbeeyey.
Hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, ayaa dagaal kharaar oo dhanka afka ah ku ku qaaday dalka Sacuudi Carabiya oo loolan siyaasadeed kala dhaxeeyo dalkiisa.
Daawo: Ra'iisalwasaare Kheyre oo markab dushii kula kulmay masu'uuliyiin ka tirsan EU